မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths II | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths II
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths II
မြစ်ဆုံက စစ်ကိုင်းမြေငလျင်ကျောပေါ်မှာတင် တည်ရှိနေတယ်၊
ဥပမာ အောက်ပါ အနောက်မီဒီယာ ကဒီလို ပြောကြတယ်၊
၁၀ဝ ကီလိုမီတာ ထက်နဲတယ်လို့လဲပြောတယ်၊
၁၀ဝ km က ၆၂ . ၁၃၇၁ မိုင် နဲ့ညီမျှတယ်)
၂၆ မိုင်လို့လဲပြော တယ်
( ၆၂ ကို ၂၆ဖြစ်အောင် “၆” နဲ့ “၂ “ကို နေရာလဲပစ်တယ်)
ကျွမ်းကျင်သူ ဦးတင့်လွင်ဆွေ က ပြောတယ် ဆိုပြီး ၃ဝ မိုင် လို့
မြေပုံကိုသေချာကြည့်ပါ၊ ၁၀ဝ ကီလိုမီတာ မကပါ ၆၂ မိုင် မကပါ၊
အကွာအဝေး အမှန်အကန်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတိုင်းတာလိုသလား၊
မြေပုံလက်ဝဲဘက်အောက်မှာ အကွာအဝေးတိုင်း Scale စကေး ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်နော်၊
မေခနဲ့မလိခ မြစ်ငယ် နှစ်ကြောင်းကိုအရင်ရှာပါ၊
၎င်းတို့ဆုံရာမြစ်ဆုံကိုဗဟိုပြုပြီး စစ်ကိုင်းမြေငလျင်ကျော (အနောက်)ဘက်ကို
ပေကြိုး သို့မဟုတ် ချည်မျဉ်တချောင်းနဲ့တိုင်းပါ၊
ပြီးတော့ အဲဒီပေကြိုး သို့မဟုတ်ချည်မျဉ်ကို ဖော်ပြထားတဲ့ scale စကေး နဲ့ယှဉ်ကြည့်ပါ
(၁၃ဝ မှ ၁၄၀) ကီလိုမီတာ တနည်း (၈၁ မှ ၈၇) မိုင် ဝန်းကျင် ရှိမယ်
ဝေးလေ ငလျင်ရဲ့စွမ်းအား အာနိသင် နဲလေ အပျက်အစီး
အဲဒီ မိုင် ၈၄ ဟာဘာနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်
ရန်ကုန် ဒိုက်ဦး က မျဉ်းဖြောင့် မိုင် ၇၁
ရန်ကုန် ဟင်္သာထ က မျဉ်းဖြောင့် မိုင် ၇၃
ရန်ကုန် သထုံ က မျဉ်းဖြောင့် မိုင် ၇၈
မန္တလေး မကွေး မျဉ်းဖြောင့် မိုင် ၇၅
မန္တလေး ရမည်သင်း မျဉ်းဖြောင့် မိုင် ၇၆
ဖြစ်စဉ်အကြိမ် အချိန် ကာလ အကွာအဝေး ခြားတာ
အက်ကြောင်းအရှည် အလျားထုထယ် ပမာဏ
ကူမြူ နစ်ခြင်း တူတာတောင် ဗီယက်နမ်က အရင်းရှင်ယူအက်စ်ရေတပ်၊ တရုတ်ရန်သူ ဂ ျပန်ရေတပ် ဆီက အကူအညီယူတာ ဘာသပေါလဲ၊ သူ့ရေပိုင်နက်ကို တရုတ်ရန် ကာကွယ်ဖို့ ပူးပေါင်းကုန်ပြီ ကြေးမုံဂျီး…
မြစ်ဆုံကို.. ဒေါ်စုက မဖြစ်သင့်ဖူးထင်ရင်.. တခါထဲ.. ပက်ကနဲ့.. မလုပ်ဖူးဟေ့.. လို့ပြောလိုက်မှာပေါ့..။
အခုလောက်အချိန်ဆွဲနေတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုက… လုပ်သင့်တာတွေကြောင့်.. လုပ်ချင်တဲ့ဖက်ကဲနေတာလို့ထင်တယ်..။
မြန်မာပြည်မယ်… ဒေါ်လာ ဘီလီယံချီအလုပ်တခုကိုလုပ်ဖို့…. ချိုင်းနားက.. အဲဒီအချိန်ကစစ်အစိုးရကို.. ရင်းနှီးမြုတ်နှံငွေစုစုပေါင်းရဲ့.. ၁၀% ကနေ.. ၂၀% အထိ..( သေချာပေါက်.)..လာဘ်ပေးရမယ်…။
ဒီငွေတွေက.. အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးအတွက်အနှောင့်အသွားလွတ်ပါ့မလား.. တွေးနေပုံပဲ…
သမ်းရှစ်ရာ လေ ျာ်ရမည်ဆိုလည်း အေးရှားဝေါလ်ဆီက ညှစ်လိုက်ယုန်ပေါ့ မာမူခိုင်မ်ရာ.. အဲဒီ ဘိန်းကုမဏီ သမ်းရှစ်ထောင်လောက် တန်ပါတယ်….။ ပိုတဲ့ပိုက်ဆံထုပ်နဲ့ ကြေးမုံဂ ျီးကို ပေါက်ထည့်လိုက်…
အပိုင်း ၁ တုန်းက မေးခွန်းတွေ အကုန်… ချက်ကျလက်ကျ ဖြေရှင်းနိုင်ရင်…ပိုကောင်းပြီ…
ဒီဒေသရဲ့ ဘူမိဗေဒ တည်ဆောက်ပုံကို ပြောပြဘို့ အတွက် ပထမဦးစွာ အောက်ပါ အကြောင်းအရာ များကိုပြောပါရစေ။
ကမာ္ဘကျောက်ချပ်ကြီးများဟာ ရွေ့လျှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာဘက်ခြမ်းက ကွဲကွာ အနားစပ်မှာ ကမာ္ဘ့အတွင်းပိုင်း Mantle Layer မှကျောက်ရည်ပူများဟာ အလှည့်မှန်မှန် ထိုးဝင်အေးခဲပြီး ကျောက် ချပ်ကို အခြားတစ်ဘက်ကို ရွေ့လျှားစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
“ကျောက်လွှာထု ချပ်ကြီးများရွေ့လျှား မှု (Continental Drift) နှင့် မြေငလျှင်ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်မှု”
” Continental ၏အကျိုးဆက်တစ်ခု ဖြစ်သော မြေငလျင် ဖြစ်ပေါ်ပုံ”
*** ထိုသို့ ကမာ္ဘ့ ကျောက်ချပ်လွှာကြီးများ ရွေ့လျှားကြရာမှ ကျောက်လွှာ ချပ်ကြီးများရဲ့ အနားသတ် ဘေးနယ်နိမိတ် များ အချင်းချင်း ယှဉ်စပ်ကာ ထိခိုက် လှုပ်ရှားမှု ကြောင့် “မြေငလျှင်ကြော ဗဟိုပြုရာ ရပ်ဝန်းများ ဖြစ်ပေါ်ပြီး -မြေငလျင် များ လှုပ်ခတ်စေတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။***
” ယာယီမျှသာ ပိတ်မိနေတဲ့ ဖိအား နှင့် တွန်းအားများရဲ့ စွမ်းပကားက ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားနိုင်မှုထက် အလှမ်းကွာဝေးလွန်းလှပါတယ်။ ကျောက်လွှာများက ဖိအားနှင့် တွန်းအားများ ဒဏ် ခံရတဲ့အခါ တွန့့်လိပ်ကာ ကြိတ်ခံပြီး နောက်ဆုံးမှာ ခံနိုင်မှုကို ကျော်လွန်တာကြောင့် ရုတ်တရက် ကျိုးပြတ်ကာ ရွေ့လျှားကြပါတယ်။ ကျောက်လွှာများ ကျိုးပြတ်မှု အကျိုးဆက် ဖြစ်တဲ့ မြေငလျင် လှိုင်းများက ဆက်တိုက်ပင် တုံခါ မှု ကို ပို့လွှတ်ပါတယ်။” (This Changing Earth, တင်မြင့် နွားထိုးကြီး)
“မေခ မလိခ မြစ်ဆုံဒေသ ၏ ဘူမိဗေဒ တည်ဆောက်ပုံ”
“စိုးရိမ်ဘွယ်ရာ အနာဂတ် အလားအလာ”
” ခြုံငုံ သုံးသပ်ချက်”
1- “ရွေ့လျားပြောင်းလဲနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကမာ္ဘ ၊ This Changing Earth.”တင်မြင့်(နွားထိုးကြီး)
6~ ဓာတ်ပုံများကို အထက်ပါ website များနှင့် ဆက်စပ် Link များမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
အပေါ်က ” မြစ်ဆုံဒေသ ၏ ဘူမိဗေဒ” ထဲကမြေပုံက စကိုင်းပြတ်ရွှေ့… အနီကြောင်းကို.. စာရေးသူက ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ရေးခြစ်လိုက်ပုံရပါတယ်..။
တကယ့်အခြေအနေက.. အောက်ကအတိုင်းဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့.. ပုံနဲ့ အချက်အလက်တွေကို..အောက်ပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ..ကြည့်နိုင်ယူနိုင်ပါကြောင်း…။
အလွယ်တကူဖတ်နိုင်ရန် မာတိကာ ၃၀။ http://myanmargazette.net/227589